Gtalk/Gmail အကောင့်တွေ free of charge နဲ့ဖွင့်ပေးပါမယ်။ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမန်ဘာဝင်များအားကူညီပါရစေ။ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
အဖွဲ့များအားလုံးကိုယ့်အဖွဲ့များ Gtalk/Gmail အကောင့်တွေ free of charge နဲ့ဖွင့်ပေးပါမယ်။ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမန်ဘာဝင်များအားကူညီပါရစေ။
စတင်တည်ထောင်သူ han htike aung
ဂျီမေး အကောင့်လိုချင်သူများအတွက် အကောင့် လုပ်ပေးပါမည်။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာက touchmate2012@gmail.com ပါ။ လိုချင်သော နာမည်နဲ့ ပါ့စ်ဝါဒ့်ကို ရေးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု= May 23, 2012 Like 22 members like this
Gtalk/Gmail အကောင့်တွေ free of charge နဲ့ဖွင့်ပေးပါမယ်။ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမန်ဘာဝင်များအားကူညီပါရစေ။ သို့အဖွဲ့ဝင်ပြီးမှ မှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
han htike aung သည် May 23, 2012 က 3:45amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဂျီမေး အကောင့် ပြန်လုပ်လို့ရပါပြီ ဓမ္မ မိတ်ဆွေများ။ han htike aung သည် January 29, 2012 က 8:54pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အခု နောက်ပိုင်း မနေ့က စပြီး ဂျီမေးအကောင့် လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ blumail.org နာမည်နဲ့ ဂျီမေးအကောင့်ပဲ၇တော့ပါမယ် ဓမ္မ မိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့။ ကျွန်တော့် ဖုန်းနံပါတ်ကို အကောင့် veryfication code မပို့တော့လို့ပါ။ကျွန်တော့် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဆက်ပြီးအကောင့်လုပ်လို့မရတော့လို့ပါ။ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို အကောင့်လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ဆိုတာရှိတယ် အဲ့ဒါ ပြည့်သွားတာ။ ဆိုတော့ကာ ဥပမာ jiwhflie@blumail.org ပဲရတော့မယ်နော်။လိုချင်ရင်တော့လုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ် လောကအကျိူးကို တတ်နိင်သလောက်သယ်ပိုးလျှက်............... han htike aung သည် January 25, 2012 က 1:17amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အကောင့်လိုချင်ရင် ဒီနေရာမှာ ရေးထားခဲ့နိုင်သလို ကျွန်တော့်အိမ် မှာလည်း comment ရေးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ han htike aung သည် January 25, 2012 က 1:12amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ko toe toe ကျွန်တော် အကောင့်ကို လုပ်ပြီးသွားပြီ။ အကောင့်နာမည်က kyawswarhein380@gmail.com ပါ။ပေးထားတဲ့နာမည်က လုပ်လို့မရဘူး အကောင့်လုပ်ပြီးသားနာမည်ဖြစ်နေတယ်။ စာပို့လိုက်တာပိုကောင်းတာ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေ မဖြစ်သေးတော့ပို့လို့မရလို့ ဒီနေရာကပဲရေးလိုက်တယ်။ toe toe သည် January 24, 2012 က 9:35pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ Dear, I want to get another account.
Please,making for me and send me.
(another account) usear name ; kyawswarhein
password ; everpeace အဖွဲ့ဝင်များ(11)
နန်းလေး ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Top News · Everything dimplemit leftacomment for ဆုမြတ်"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"5 minutes agoThwe zin postedablog postမြတ်ဗုဒ္ဓ....ဗောဓိညောင်ပင်.တွင်ပါရမီအစွမ်းဖြင့် " မာရ်နတ် "ကို အနိုင်ယူတော်မူ ၏။တိုက်ဆိုင်တဲ့ ကဆုန်လပြည့်နေ့လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများရဲ့ ကိုးကွယ်ရာမြတ်ဗုဒ္ဓ…See More6 minutes ago 0
နန်းလေး leftacomment for ♣တောသူမလေး♣"ကျေးဖူးပါ.."7 minutes agoကျော်ကျော်အောင်, ဆုမြတ်, sandawbartha and3more joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺8 minutes agoမူကြိုဆရာ posted blog postsတောင်ဖီလာဆရာတော်နှင့် စက်တော်ရာနှစ်ဆူ ရှာဖွေခြင်းမဟာသမယသုတ် (မြန်မာပြန်)“… ဓမ္မပဒဂုဏ်ရည် …”4 more…31 minutes agoAngledaewi commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post 'တောင်ပြာတန်းမှာ ကြွေသောပန်းများ(သို့မဟုတ်)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်စတေး၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူများ.. …'"ထပ်တူစိတ်မကောင်းပါဘူးဘု၇ား။"32 minutes agodimplemit posted blog postsပုညကြိယ၀တ္တု(၁၀)ပါးတန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၄တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည် ....၃2 more…57 minutes agoAngledaewi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookငြိမ်းချမ်းခြင်း တရားတော်1 hour agoAngledaewi shared thein wai's blog post on Facebookလူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားနေရတဲ့ “ ဒုက္ခ (၇) မျိုး ” ။1 hour agoAngledaewi commented on thein wai's blog post 'လူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားနေရတဲ့ “ ဒုက္ခ (၇) မျိုး ” ။'"ကောင်းပါသည်။"1 hour agoAngledaewi liked thein wai's blog post 'လူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားနေရတဲ့ “ ဒုက္ခ (၇) မျိုး ” ။'1 hour agoခိုင်စုမြတ် liked thein wai's blog post 'ပြုပြင်စရာတွေ ပြုပြင်ကြပါ။'2 hours ago More... RSS